Ahoana ny fahafantarana raha misy mpitsikilo avy aminay amin'ny mikrô (PC sy finday avo lenta)) Emulator.online ▷ 🥇
Ny tsiambaratelo tsara dia nanjary sarotra tanterahina, indrindra rehefa voahodidin'ny fitaovana elektronika afaka misambotra amin'ny fotoana rehetra ny zavatra rehetra lazaintsika isika na ny feo avoakan'ny tontolo iainantsika na iasantsika. Raha miahiahy manokana momba ny fiainana manokana izahay ary tsy te hohenoina na hitsikilo anay amin'ny alàlan'ny mikrôfônan'ny PC na finday avo lenta, amin'ity torolàlana ity dia hasehonay anao ahoana no hahafantaranao raha misy mitsikilo anay amin'ny alàlan'ny mikrô, manatanteraka ny fanamarinana rehetra ilaina amin'ny PC Windows 10, amin'ny Macs na MacBooks, amin'ny finday na tablette Android anay ary amin'ny iPhones / iPads.
Amin'ny faran'ny fizahana Hamarininay fa tsy manana rindranasa "mpitsikilo" na fampiharana mampiasa alalana fidirana mikrôfôna izahay raha tsy mahazo alalana avy aminay. (na angamba nahazo ny fankatoavantsika izy ireo raha maika isika, manararaotra ny fahamendrehantsika).
VAKIO IZAO: Arovy ny webcam-nao PC sy mikrôo anao mba tsy ho mpitsikilo ianao
Ahoana ny fanamarinana ny fampiasana microphone
Ny solosaina maoderina sy ny fitaovana elektronika rehetra dia manolotra safidy hijerena raha misy mitsikilo antsika amin'ny alàlan'ny mikrô: amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny, sarotra ny mitsikilo ny mikrô raha tsy misy fifandraisana kely amin'ny mpampiasa (izay tsy maintsy mametraka rindranasa na tsindrio eo amin'ny rohy manokana hanombohana fitsikilovana) na tsy misy teknika fanenjehana tena mandroso (ilaina hialana amin'ny fifehezana ataon'ny rafitra miasa). Mitombina daholo izany mandra-pitenintsika fitarafana ny tontolo iainanaAmin'ireny tranga ireny, ny fomba fitsikilovana olona dia tena isan-karazany ary ampiasain'ny polisy amin'ny alàlan'ny didim-pitsarana hitsikilo ireo ahiahiana.
Ahoana ny fomba hijerena ny mikrô amin'ny Windows 10
Ao amin'ny Windows 10 dia azontsika atao ny mifehy izay rindranasa sy programa afaka miditra amin'ny mikrôfôn'ny webcam na (amin'ny mikrôfona hafa mifandraika) amin'ny alàlan'ny fanokafana ny menio Start eo amin'ny ankavia ambany, kitiho configurationsmanindry amin'ny menio Intimidad ary manokatra ny menio mikrô.
Ny fikororohana eo am-baravarankely dia afaka mahita ny fahazoan-dàlana hiditra amin'ny mikrô na ho an'ny rindranasa alaina avy amin'ny Microsoft Store na ho an'ny programa nentim-paharazana; Amin'ny tranga voalohany, azontsika atao ny manafoana ny fidirana amin'ny mikrophone amin'ny alàlan'ny famonoana ny bokotra eo akaikin'ny anaran'ny fampiharana, ary raha ny momba ny programa nentim-paharazana dia tsy maintsy manokatra ny programa isika ary manova ny fanaingoana mifandraika amin'ny microphone. Raha irintsika mahazo fiainana manokana faratampony ary avelao ny fidirana amin'ny mikrophone ho an'ny fampiharana "azo antoka" fotsiny, dia manolo-kevitra anao izahay mba tsy hialanao ilay switch eo akaikin'ny rindranasa be loatra ary esory ny programa mampiahiahy na ny fiaviany tsy fantatsika. Mba hampitomboana io lafiny io dia afaka mamaky ny torolàlana ho antsika isika Ahoana ny fomba fanesorana programa amin'ny tanana tsy misy soritra na lesoka (Windows).
VAKIO IZAO: Mitsikilo PC ary jereo ny fomba fampiasan'ny hafa azy
Ahoana ny fomba hijerena ny mikrô amin'ny Mac
Na dia ao amin'ny rafitra fiasan'ny Mac sy MacBooks, izany hoe macOS, azontsika atao ny manamarina raha misy olona mitsikilo antsika amin'ny alàlan'ny mikrô mivantana avy eo amin'ny sehatra. Hanohizana ny Mac antsika, tohizantsika ny kisary amin'ilay Apple manaikitra eo amin'ny ilany havia ambony, nosokafantsika ny menio Taratasy rafitratsindrio kisary Fiarovana sy tsiambaratelo, safidio ny tabilao Intimidad ary farany andao handeha any amin'ny menio mikrô.
Ao amin'ny varavarankely dia ho hitantsika ireo rindranasa sy programa rehetra izay nangataka fidirana amin'ny mikrô. Raha mahita programa na fampiharana izay tsy fantatsika ny fiaviany na izay tsy tokony ho eo isika, dia azontsika esorina ny marika eo akaikin'ny anarany ary, rehefa voamarina isika, dia afaka manohy manala azy amin'ny alàlan'ny fanokafana ilay rindranasa. no nahitaamin'ny alàlan'ny tsindrio ny menio fampiharana eo amin'ny ilany ankavia, mahita ny rindrambaiko mpitsikilo ary, kitiho eo ankavanana, mandroso amin'ny fanafoanana amin'ny alàlan'ny fanindriana Mandrosoa fako.
Ahoana ny fomba hijerena ny mikrô amin'ny Android
Ny finday avo lenta sy ny tablette Android dia matetika no fitaovana mora hitazana azy hatrizay ny rafitry ny fandidiana dia tsy vaovao foana Ary, noho ny fampielezana azy fampielezana, tsy ny olona rehetra no manara-maso tsara raha mitsikilo amin'ny mikrôfony ny rindrambaiko napetraka. Raha hizaha ireo rindranasa mahazo alalana hiditra amin'ny mikrôfenan'ny fitaovantsika dia sokafy ny fampiharana configurations, andao mankany amin'ny menio Tsiambaratelo -> Fitantanana fahazoan-dàlana na amin'ny menu Fiarovana -> Fahazoan-dàlana ary farany manindry ny menio mikrô.
Eo amin'ny efijery izay hisokatra dia ho hitantsika ireo rindranasa rehetra izay nangataka fidirana amin'ny mikrô na manana alalana nefa mbola tsy "nanararaotra". Raha mahatsikaritra fampiharana hafahafa isika na tsy mahatadidy ny nametrahana azy dia manohy ny fanesorana ny fampandehanana mikrô (alefaso fotsiny ny bokotra eo akaikin'ny anaran'ny fampiharana) ary esory avy hatrany ilay rindranasa mampiahiahy, hisorohana ny fampahavitrihana manaraka. Amin'io lafiny io dia afaka mamaky ny torolàlana ho antsika isika Esory tanteraka ny apps amin'ny Android, na dia indray mandeha aza.
Raha te hanana fampahalalana an-tsary momba ireo rindranasa miditra amin'ny mikrô izahay, na dia tsy mampiasa rindranasa mampiasa mazava ny mikrô aza izahay, dia manolo-kevitra ny hametraka ny rindranasa Access Dots maimaim-poana, izay manome teboka kely mamiratra eo amin'ny zoro ambony ambony. isaky ny miditra amin'ny mikrô sy ny fakantsary ny rindranasa na ny fizotrany.
VAKIO IZAO: Zahao / mitsikilo telefaona olon-kafa (Android)
Ahoana ny fomba hijerena ny mikrô amin'ny iPhone / iPad
Amin'ny iPhone sy iPad, miaraka amin'ny fahatongavan'i iOS 14, hevitra fanampiny momba ny fidirana amin'ny fakantsary na ny mikrô dia nampiana: amin'ireto tranga ireto dia teboka mena, mena na maitso no hiseho eo an-kavanana ambony, mba hahafahanao mahafantatra avy hatrany raha misy olona mitsikilo anay amin'ny alàlan'ny mikropono.
Ho fanampin'ity fanamarinana eo noho eo ity dia afaka mifehy hatrany ireo rindranasa miditra amin'ny mikrô amin'ny fitaovana Apple isika amin'ny alàlan'ny fanokafana ny fampiharana. configurations, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny menio Intimidad, ary manamarina manokana ireo rindranasa miditra amin'ny microphone, mampandeha ireo izay tsy fantatsika na mbola tsy napetraka. Mba hampitomboana bebe kokoa ny fiainana manokana rehefa mampiasa iPhone dia manasa anao izahay hamaky ny torolàlana Ny setting miafina amin'ny iPhone dia hovelomina ho fiarovana.
VAKIO IZAO: Ahoana no hitsikilo iPhone
Ny fitsikilovana amin'ny mikrô dia iray amin'ireo tanjon'ny mpijirika, mpitsikilo na mpitsongo, ary noho io antony io dia nanjary voafantina bebe kokoa ny rafitra miasa raha ny fanomezana io alalana io. Aleo foana mijery ny menus sy ny rindranasa hita etsy ambony, mba hahalalana raha sendra misy mitsikilo anay amin'ny alàlan'ny mikrô, angamba mety hahazoana ny mombamomba anao na miafina indostrialy.
Raha matahotra ny hanana rindrambaiko mpitsikilo amin'ny telefaona isika dia mitady ny fisian'ireo rindranasa hita ao amin'ny mpitari-dalana anay. Ny fampiharana tsara indrindra hitsikilovana finday (Android sy iPhone) mi Rindrambaiko maso miafina Android hitsikilo, hanarahana toerana, hafatra ary maro hafa.
Raha, mifanohitra amin'izay, matahotra izahay fa ny fitsikilovana mikrô dia natao tamin'ny alàlan'ny viriosy Android, dia manoro hevitra anao izahay hamaky ny lahatsoratra Tadiavo ary esory ny spyware na malware amin'ny Android.